कर्फ्यू लगाएर संक्रमित खोजिँदै
कोरोना इपिसेन्टरः नेपालगञ्ज
नेपालगञ्जको पहिलो संक्रमित भारतको बहराइचबाट चैत १० मा आएका थिए। उनी महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनबाट भागेका थिए। नेपालगञ्ज–८ जोलाहनपूर्वा टोलको मस्जिदका पियन उनी बालबालिकालाई उर्दू र अरबी भाषा पढाउन घरमै जान्थे।
चैत १० मा नेपालगञ्ज नाकाबाट एकैदिन नौ सय जना नेपाल भित्रिएका थिए। छसय जनालाई नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको निर्माणाधीन क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। क्याम्पसको कक्षाकोठाको भुँइमा बेडका लागि प्लाइउड राखिएको थियो। रेडक्रसले दिएका ओढ्ने–ओछ्याने सामग्री र एउटा घुम्ती शौचालयबाहेक पर्याप्त पूर्वाधार थिएन। हरेक जिल्लाका व्यक्तिलाई फरक–फरक कोठामा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कतै दुई त कतै तीनजिल्लाका व्यक्तिलाई एउटै कोठामा राखिएको थियो। उत्तरतिरको नयाँ बनाइएको भवनको पूर्र्वतिरको कोठामा बाँकेका व्यक्ति बसेका थिए। सामाजिक दूरी पनि ख्याल नगरी राखिएको थियो। क्वारेन्टिन सञ्चालनमा नआउँदै दिउँसै पर्खाल नाघेर सबै भागेका थिए। त्यसरी भाग्नेमै थिए, नेपालगञ्जको पहिलो कोरोना संक्रमित ६० वर्षीय पुरुष।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–८ को अन्सारियन मस्जिद सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समसुद्दिन सिद्दिकीका अनुसार संक्रमित व्यक्ति मस्जिदका पियन हुन्। उनी भारतको बहराइचतिर भएका परिवारका सदस्यलाई भेटेर नेपालगञ्ज फर्केका थिए। नेपालगञ्ज–५ मा घर भए पनि उनी वडा–८ को जोलाहनपूर्वा टोलको मस्जिदमा अजान (मस्जिदमा माइकबाट सूचना दिने) काम गर्थे। टोलका चारपाँच घरका आठदेखि १० जना बालबालिकालाई उर्दू र अरबी भाषा पढाउन जाने गरेको सिद्दिकीले प्रस्ट पारे।
उनीबाट कोरोना सारिएका १५ जनामध्ये १४ जना त जोलाहनपूर्वा टोलकै छन्। एकै परिवारका तीन जनामा कोराना भएको पाइएको छ। ‘आमाबा र छोरालाई कोरोना देखिएको छ,’ सिद्दिकीले आइतबार राति संक्रमितलाई खजुरास्थित आइसोलेसन अस्पतालमा पठाउँदै गर्दाको अनुभव सुनाए, ‘एकै घरमा बस्ने बाजेबज्यै, बुहारी र नातिनातिनीलाई संक्रमण सरेनछ। एकै घरका दुई–दुई जनामा पनि संक्रमण देखिएको छ। अरूलाई कोरोना देखिएको छैन। कि परीक्षण गर्ने मेसिनले काम नगरेको हो कि ?’ सबै संक्रमित आठ परिवारका छन्। १६ जना संक्रमितमध्ये तीन–तीन जना संक्रमित परिवारको संख्या तीन रहेको छ। दुई–दुई जना संक्रमित दुई परिवार र एक–एक जना संक्रमित तीन परिवारका छन्। उनीहरू अधिकांशले आफूहरू नजिकै पान पसल र रानीतलाउस्थित तरकारी मण्डीमा जाँदा कोरोना सरेको प्रारम्भिक बयान दिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेशबाबु श्रेष्ठले बताए।
पहिलो संक्रमित व्यक्तिबाट कोरोना सरेको हो वा अरूबाट भन्ने कुरा अझै प्रस्ट भइसकेको छैन। पहिलो संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका ९० जनालाई ट्रेसिङ गरेर ५५ जनाको थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्दा थप १५ जनामा संक्रमण भेटिएको छ। एकै जना व्यक्तिबाट कसरी सिंगो टोलमै संक्रमण फैलियो भन्ने कुरा अझैप्रस्ट भइनसकेको कोरोना फोकल पर्सन श्रेष्ठले बताए।
नेपालकोे सन्दर्भमा एकै व्यक्तिबाट अहिलेसम्म यति धेरै व्यक्ति कतै पनि संक्रमित भएका छैनन्। देशमै पहिलो पटकसात वर्षीया बालिका पनि संक्रमणको शिकार भएकी छन्। यसअघि जनकपुरमा १४ वर्षीय बालकमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। सात वर्षदेखि ६० वर्षका संक्रमित भेटिएका छन्।
विदेशबाट आएको व्यक्तिमा संक्रमण देखिनु पहिलो चरण मानिन्छ। संक्रमितबाट अरूमा सर्र्नुलाई दोस्रो चरण भनिन्छ भने तेस्रो चरणमा समुदाय स्तरमा हुनु रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। नेपालगञ्जमा समुदाय स्तरमै देखिएकाले तेस्रो चरणमा पुगेको छ। संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्क भएका सबै व्यक्तिको ट्रेसिङ गर्दा अझै धेरै जनासम्म कोरोना फैलिसकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यकर्मी एक पटक कोरोना परीक्षण गरिएका व्यक्तिको फेरि पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
तीन दिन निषेधाज्ञा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले समुदायस्तरमा कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिनका लागि तीन दिनको निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सोमबार नेपालगञ्जमा बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि २५ वैशाखको मध्यरातिसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले बताए। ‘कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न, संक्रमितको कन्ट्याक्ट टे«सिङ गर्न, स्वाब संकलन गर्न निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो,’ प्रजिअ खड्काले भने। स्वाब संकलनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीबाहेक सबैलाई घरबाहिर निस्कन नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
कुनै लक्षण छैन
नेपालगञ्जमा भेटिएका संक्रमितमा कसैलाई पनि कोरोना रोगका कुनै लक्षण नै देखिएका छैनन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका फिजिसियन डा. खगेन्द्रजंग शाहका अनुसार सुरुमा संक्रमित भएका व्यक्तिदेखि आइतबार भेटिएका १५ जना सबै स्वस्थ छन्। उनीहरूलाई खजुरा गाउँपालिकास्थित क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिए पनि कुनै रोग नदेखिएपछि उपचार गर्र्नुपर्दैन। समय–समयमा कोरोना जाँच मात्र गरिरहने हो। कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि मात्र उपचार गर्ने हो। अत्यधिक समस्या भए भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ। एउटै टोलका धेरै जनामा कोरोना देखिएकाले डा. शाह अरूको पनि टे«सिङ गरेर कोरोना जाँच गर्नुपर्ने बताउँछन्। सुरुमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान गरी होम क्वारेन्टिनमै आइसोलेसनमा राख्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार जिल्लामासोमबारसम्म ९ सय ५१ जनाको कोरोना जाँच गरिएको थियो।जसमध्ये ८ सय ९६ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। आरडीटी विधिबाट ५ सय ९३ को कोरोना जाँच गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन श्रेष्ठले जानकारी दिए। पीसीआर विधिबाट ३ सय ५८ जनाको परीक्षण गरिएको थियो। जसमध्ये १६ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। सोमबार रातिसम्म पहिलो कोरोना संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका ३९ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ।
बाँकेका ३१ जनाको थ्रोट स्वाब राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकुमा जाँच गरिएको थियो। ती सबै नमुनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। भैरहवास्थित प्रदेश ५ को कोरोना प्रयोगशालामा ६१ वटा नमुना जाँच भएकोमा ती सबै नेगेटिभ आएका थिए। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा ७ वैशाखदेखि प्रयोगशाला सुरु भएयता ३ सय ६६ जनाको पीसीआर विधिबाट जाँच गरिएको छ। अस्पतालमा सोमबार गरिएको परीक्षणको मंगलबार बिहान आएको रिपोर्टअनुसार सात जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार नयाँ संक्रिमतहरू नेपालगञ्ज–८ का २२, ३० र ४० वर्षका पुरुष र ३२, ३४, ५५ वर्षीया महिला तथा एक नौ वर्षीया बालिका छिन्। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। सात जना नयाँ संक्रमित थपिएपछि नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या २३ र नेपालमा संक्रमितको संख्या ८२ पुगेको छ। यीमध्ये १६ जना निको भइसकेका छन्।